February 15, 2020 - MM Live News
နောကျဆကျတှဲကုသမှုတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ပွနျကုမှပဲအဆငျပွတေော့မယျ…
February 15, 2020 February 15, 2020 MM Live News
ဆေးထပ်ကုဖို့ပိုက်ဆံလိုငွေ သိန်း (၁၅၀၀) ထပ်လိုနေပါတယ် ၊ ပထမ အလှူခံရရှိငွေ သိန်း (၁၀၀၀) ကကုန်တော့မှာပါ။ဖခင်မှာစီမံဘဏ္ဌာဝန်ကြီးရုံး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး လစာ – 312000 ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်…. လက်ရှိမှာ ပထမ လှူဒါန်း‌ရရှိငွေ သိန်း (၁၀၀၀)ဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ Samitivej children’s hospital မှာတက်ရောက်ကုသနေပါတယ် ၊ ဓါတ်ကင်ဖို့ အတွက် သွားပိုးစားနေတာကို ကုပီးရင် FB မိတ်ဆွေတွေ အကြံပေးတဲ့ အတိုင်းပိုမိုဈေးသက်သာတဲ့ ဘုရင့်သမီးတော်ဆေးရုံchulabhorn ကိုပြောင်းပါမယ်။ ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် အရည်ကြို မှတ်ချက် ၊ ကုန်ကျငွေ အသေးစိတ်အား မန့်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။သမီး ဓါတ်ကင်တာက တစ်ပတ် ၅ ရက်နဲ့ ၆ ပတ် ကင်ရမယ်တဲ့ ကိုအရည်ကြို နောက်ထပ် ၂ လလောက် ကုသမှုခံရအုံးမယ်။ […]
February 15, 2020 MM Live News
ချစ်သူများနေ့ပန်းခြံထဲမှာချိန်းတွေ့တဲ့ အတွဲမှန်သမျှ ရဲတွေက ကြိမ်နဲ့ရိုက်ဆုံးမ(ရုပ်သံ) ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားခဲ့တာပါ…။ သူတို့နိုင်ငံမှာက တရားဝင်လက်ထပ်ထားခြင်းမရှိပဲ သမီးရည်းစားအပြင်မှာချိန်းတွေ့ခွင့် မရှိဖူးထင်ပါရဲ့။ မရှိဖူးလို့တော့ ကြားဖူးတာပဲ။ ဒီမြင်ကွင်းလေးကတော့ လိုင်းပေါ်မှာ အရမ်းကိုဟော့ဖြစ်နေပါတယ်။ ရည်းစားမရှိတဲ့ Fa တွေက ၀မ်းသာလုံးဆို့ပီး ထကနေကြလေရဲ့။ ခုဒီဗွီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ သင်ရော ရည်းစားမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ၀မ်းသာမှာလား? ဒီဗွီဒီယိုလေးကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Like လုပ်ပီး ရှယ်သွားလိုက်ပါ….။ ပေသီး။ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ unicode ခဈြသူမြားနပေ့နျးခွံထဲမှာခြိနျးတှတေဲ့ အတှဲမှနျသမြှ ရဲတှကေ ကွိမျနဲ့ရိုကျဆုံးမ(ရုပျသံ) ဒီအဖွဈအပကျြလေးကတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာဖွဈသှားခဲ့တာပါ…။ သူတို့နိုငျငံမှာက တရားဝငျလကျထပျထားခွငျးမရှိပဲ သမီးရညျးစားအပွငျမှာခြိနျးတှခှေ့ငျ့ မရှိဖူးထငျပါရဲ့။ မရှိဖူးလို့တော့ ကွားဖူးတာပဲ။ ဒီမွငျကှငျးလေးကတော့ လိုငျးပျေါမှာ အရမျးကိုဟော့ဖွဈနပေါတယျ။ ရညျးစားမရှိတဲ့ Fa တှကေ ဝမျးသာလုံးဆို့ပီး ထကနကွေလရေဲ့။ ခုဒီဗှီဒီယိုကိုကွညျ့နတေဲ့ […]
မိဘကို ပေးဆပျတဲ့ ထူးခွားတဲ့ ငါး…
မိဘကို ပေးဆပ်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ငါး Northern Snakehead ဒီငါးမျိုးတွေဟာ အမက ဥတွေဥပြီးတာနဲ့ မျက်လုံးတွေကွယ်သွားပြီး ဒုက္ခိတဘဝကို ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။ မျက်စိအလင်းကွယ်သွားတာကြောင့် အစာရှာမစားနိုင်တော့ပဲ အားအင်တွေလည်းဆုတ်ယုတ်လာပါတယ်။ ဥတွေကနေ ထောင်သောင်းချီတဲ့ ငါးလေးတွေပေါက်လာတဲ့အခါ အားအင်ဆုတ်ယုတ်နေတဲ့ မိခင်ကြီးအသက်မသေအောင် တစ်ကောင်ချင်းစီ မိခင်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲဝင်ပြီး အစားခံကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ငါးမိခင်ကြီးက အသက်ရှင်ပေမယ့် ငါးပေါက်လေးတွေထဲက ဆယ်ပုံတစ်ပုံလောက်တာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် Northern Snakehead ငါးတွေဟာ အသက်နဲ့ရင်းပြီး မိဘကျေးဇူးကိုဆပ်ကြတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ငါးမျိုးစိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းဂိုဏ်ချုပ်ကြီး /Photo >>>credit unicode မိဘကို ပေးဆပျတဲ့ ထူးခွားတဲ့ငါး Northern Snakehead ဒီငါးမြိုးတှဟော အမက ဥတှဥေပွီးတာနဲ့ မကျြလုံးတှကှေယျသှားပွီး ဒုက်ခိတဘဝကို ရောကျရှိသှားပါတော့တယျ။ မကျြစိအလငျးကှယျသှားတာကွောငျ့ အစာရှာမစားနိုငျတော့ပဲ အားအငျတှလေညျးဆုတျယုတျလာပါတယျ။ […]
ရနျကုနျမွို့ ကနျတျောကွီးမှာ မနကျတိုငျး ၁၇နဈတိုငျတိုငျ နစေ့ဉျမပွတျ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို အစာကြှေးလာခဲ့ပါတယျ…
၁၇နှစ်တိုင် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အစာကျွေးလာသူ အသက်၆၇နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးအေးချိုဟာ မနက်တိုင်း ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးမှာ ၁၇နစ်တိုင်တိုင် နေ့စဉ်မပြတ် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အစာကျွေးလာခဲ့ပါတယ်။ လူတွေနားကို ကပ်ခဲလှတဲ့ ကျီးကန်းတွေ၊ ကြွက်ကလေးတွေဟာ ဦအေးချိုကုို မနက်တုိုင်း မျှော်နေတတ်ကြပြီး ငှက်ကလေးကြွက်ကလေးတွေကုို အစာကျွေးတဲ့အခါတဦးက စေတနာ …. တစ်ဦးက မေတ္တာနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံနေကြတဲ့ ကြည်နူးဖွယ် မြင်ကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။(ဓာတ်ပုံ ရွှေအင်းသားခင်မောင်ဝင်း) unicode ၁၇နှဈတိုငျ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို အစာကြှေးလာသူ အသကျ၆၇နှဈ ရှိပွီဖွဈတဲ့ ဦးအေးခြိုဟာ မနကျတိုငျး ရနျကုနျမွို့ ကနျတျောကွီးမှာ ၁၇နဈတိုငျတိုငျ နစေ့ဉျမပွတျ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို အစာကြှေးလာခဲ့ပါတယျ။ လူတှနေားကို ကပျခဲလှတဲ့ ကြီးကနျးတှေ၊ ကွှကျကလေးတှဟော ဦအေးခြိုကို […]